Safarkii Madaxweynaha Puntland ee kismaayo oo dib u dhacay & diyaaradii siday oo Garoowe ka soo dagtay – Radio Daljir
Safarkii Madaxweynaha Puntland ee kismaayo oo dib u dhacay & diyaaradii siday oo Garoowe ka soo dagtay
Oktoobar 9, 2019 12:38 g 1
Waxaa gordhowayd soo gaaray magaaladda Garoowe ee Caasimadda Dowladda Puntland diyaaradi la filayeey inay u duusho kismaayo ee ka ambabaxday garoonka diyaarada ee Boosaaso.
safarkooda ayaa la sheegay in uu u baaqday sababo la xiriira in xilliga ay ku beegmayaan Kismaayo ay noqoneyso Habeen, maadaama garoonka Kismaayo uu laheyn nalalka diyaaraduhu ku degaan garoonka xilliyada habeenkii.
dhinaca kale Ilo kala duwan ayaa sheegaya in Wafdiga Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ay maalinta berri u ambabixi doonaan magaalada Kismaayo, si ay uga qeyb galaan munaasabadda caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland.
waxaa la filayaa in diyaarada uu la socday maanta Madaxweynaha Puntland ay berri ka qaadi doonto Garoowe wufuud kale oo ka qayb galaysa Caleemasaarka Madaxweynaha Jubbaland,kuwaas oo uu kamid yahay Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan faroole iyo xubno kale oo xamar ka yimid.
Guddoomiyaha Aqalka sare oo ku baaqay in la dhameeyo khilaafka DFS iyo Maamul gobaleedyada (Daawo)
ILAHAY LA RID ISAGA IYO INTA RAACDABA